Chantal Esdelle, mpiangaly mozika, miresaka momba ny fomba nataon’ilay areti-mandringana hamohazana indray ny Karnivaly ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Chantal Esdelle, mpiangaly mozika, miresaka momba ny fomba nataon'ilay areti-mandringana hamohazana indray ny Karnivaly ao Trinidad & Tobago
Voadika ny 08 Febroary 2021 17:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, English
Trinidadiana mpiangaly mozika, Chantal Esdelle (afovoany) sy ny tarika Moyenne misy azy, namerina amin'ny fomba vaovao indray ny habaky ny Karnivaly, tsy tamin'ny alàlan'ny mozikan-dry zareo ihany, izay manafangaro ny jazz, ny calypso sy ny steelpan, fa koa tamin'ny alàlan'ny fomba nataon'ny COVID-19 nanerena an-dry zareo hamorona. Sary natolotr'i Esdelle tam-pitiavana, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy. Mpakasary: Maria Nunes.
Tsy zavatra mahagaga raha nitarika nankany amin'ny fanafoanana ireo fankalazàna ny Karnivaly ao Trinidad & Tobago ny fandalovan'ilay valanaretina COVID-19. Fa ny tsy nampoizin'ireo sasantsasany mpisehatra amin'ilay Karnivaly dia ny nanambaràn'ny National Carnival Commission (NCC), masoivohom-panjakana mpiandraikitra ilay fetibe, fa tsy hikarakara hetsika virtoaly izy, na eo aza ny zavamisy hoe ireo fetibe hafa malaza erantany, ny iray malaza indrindra any Nouvelle- Orleans ohatra, dia hikarakara ny fankalazàny ety anaty tambajotra ny 15 sy 16 Febroary.
Winston “Gypsy” Peters, mpiangaly calypso fahiny ary lasa pôlitisiàna sy filohan'ny NCC amin'izao fotoana izao, dia niaro io fanapahankevitra io tamin'ny filazàna ny Karnivaly ho “fanatanjahantena ifampitankosinana” sy mila “olona betsaka”. Ho solony, sosokevitry ny NCC ny hanaovana jeritodika ireo 100 taona nisian'ny karnivaly nasiônaly. Nampian'i Peters hoe ny Karnivaly dia loharanom-bola ho an'ny firenena ary andraikiny ny miantoka hoe tokony hisy tamberina ny vola naloan'ireo mpandoa hetra.
Niteraka kiana ny fanapahankevitra noraisiny, tsy teny anivon'ireo mpanakanto fotsiny, na ireo mpanefy endrika sy ny mpiangaly mozika ary mpandihy izay ireo hetsika rehefa Karnivaly no tena iankinan'ny fiainany—maro amin'ireo no sady mampiantrano ireo hetsika virtoaly sy manaraka ny fepetran'ny COVID-19, ary manao ny azy ireo manokana—fa koa kiana avy amin'ireo izay mihevitra ilay fetibe nasiônaly ho zavatra mifàka lalina sy misy lanjany betsaka, fa tsy fandraisana anjara tsotra fotsiny amin'ny harinkarena faobe (PIB) ao amin'ny firenena.
Iray amin'ireny mpanakanto ireny i Chantal Esdelle. Fotoana fohy taorian'ny nitrangan'ilay valanaretina, nanomboka nanao fampisehoana tamin'ny alàlan'ny podcast, tamin'ny anaran'ny Ethnic Jazz Club studio-ndry zareo, izy sy ny tarika Moyenne misy azy, vondrona mpiangaly jazz ao Trinidad & Tobago izay mifikitra lalina amin'ny calypso nentindrazana sy steelpan ao amin'ny firenena. Nampiasa ny bilaoginy ihany koa i Esdelle hiresahana momba ny fomba ahafahan'ny olona mifandrohy indray amin'ilay Karnivaly amin'ny fomba misy dikany kokoa anatin'izao fotoana nakorontanan'ilay valanaretina ny zavatra rehetra efa mipetraka izao. Tamin'ny alàlan'ny imailaka sy ny telefaona no nifampiresahanay momba izay azo atao.
Chantal Esdelle. Sary natolotr'i Esdelle tam-pitiavana, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy. Mpakasary: Maria Nunes.
Janine Mendes-Franco (JMF): Amin'izao fotoana izao raha ny tokony ho izy dia efa miaina ny tazon'ny karnivaly i Trinidad & Tobago. Ho anareo, toy ny ahoana no fidonan'ny tsy fisian'ilay fetibe amin'ity taona ity?
Chantal Esdelle (CE): Ety ivelany, [mahatsapa] mangorintsina [aho], izay azo adika ho fahatsapako alahelo sy fahaverezana. Anatin'ny sokajy “steelband” … Panorama sy J’ouvert ny Karnivaliko. Toerana iray io hihaonako amin'ireo namana efa hatry ny ampolo taona maro, sy hanaovako drafitra, hakàko aingampanahy, hifanenàko amin'ireo tanora [mpiangaly mozika] ary hamelona indray ny hafanana miaraka amin'ireo zokiolona. Tena fahabangàna lalina ho ahy izany.
JMF: Ao anatin'ny lahatsoratry ny bilaoginao, marihanao fa ny fomba anaovana ilay Karnivaly dia “mifandray amin'ny lafiny maro amin'ny fomba maron'ireo karnivaly tany am-piandohany, misy fameperana sy faneriterena.” Ahoana no nampifandrindràna ny fotokevitrao Backyard Jam ho ao anatiny?
CE: Ao anatin'ilay lahatsoratra dia nanosoka hevitra aho hoe ny Backyard Jam no fomba fankalazana[y] amin'ity taona ity, ary dia mety hakatona io sy ny hafa rehetra, toy ny andraràna ireo atrikasa hafa marobe ihany tamin'ny Karnivaly tany aloha be tany. Lazaiko tsy asiana fitanisàna loharano izany, na iray aza. Kanefa, ny fomba fiantraikan'io tamiko dia ny fijerena ny nahaterahan'ny fahaizamamoron-javatra ao anatin'ny Karnivaly tao anatina habaka iray akaiky [misy fifandraisana am-pahendrena], dia avy eo mihovitrovitra mivoaka. Vao mainka mandrisika ahy io hanohy ilay lasitra efa nanananay momba ny ‘studio’ iray mamokatra asa ho an'ireo patiraonay, saingy ankehitriny mihodinkodina amin'ny fampisehoana [ny zavatra ataonay] ho an'ireo mpanaraka manerana izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fandefasana lahatsary noraketina momba azy io.
Teny aloaky ny vava ny Backyard Jam, [mifototra amin'ny] fandraisana anjara fa tsy ny sarany, ary ny fandraisana anjara amin'ny hetsika iray — tsy fanjifàna vokatra iray— izay toerana misy ny Karnivaly amin'izao fotoana izao, araka izany… fiverenana io.
JMF: Lazainao hoe “fiverenana ho amin'ny fahatongavan-tsain'ny isambatan'olona ary famerenana ny fahatokiana ara-kolontsaina” mibosasaka avy amin'io fahatakarana vaovao ny tanjon'ny Karnivaly io.
CE: Fahatokiana ara-kolontsaina … azo ambara hoe tokony hanana izany ianao ao anatina habaka iray tery satria tsy mahazo manao hadalàna amin'ny olona ianao rehefa kely ny elanelana amin-dry zareo, araka izany dia mila mandray fanapahankevitra mazava ianao momba izay ho ataonao, ary io dia ilàna mandrakariva fisaintsainana kely sy fitadidiana. Araka izany, ho ahy io dia famerenana, ary antenaiko fa ny fanelezana azy dia hahafahan'ny sasantsasany mandrombaka azy, toy ilay mozikan'i Andre Tanker sy Boogsie ary ny mozikan'i Ralph McDonald any anaty kaonseritra sy hatramin'ireo rakitsarin'ny TTT [Trinidad and Tobago Television, trano famoahana vaovao an'ny fanjakàna] mihitsy aza dia mety hambabo ahy… na ireo fandrindràna avy amin'i Earl Rodney sy Clive Bradley fony aho nandre an-dry zareo tsy nahy tao amin'ny fampielezampeo na nolalaovina tamin'ny vely sahafa vy.
JMF: Fomba ahoana no itondran'ireo mpanakanto zavabaovao avy amin'ny kitapombola kelin-dry zareo, ary inona no tsapanao ho fiantraikany amin'ny Karnivaly rehefa ela ny ela?
CE: Amin'ny ankapobeny dia manao ny azy manokana any ireo mpanakanto, avy eo mandefa izany eny anaty tambajotra … betsaka ny olona no mampiasa ny tolotra Wack. Enga anie, mba handrisika ny olona hanohy hanao asa tsy miankin-doha io ary hitarika mankany amina fahamaroan'endriky ny karnivaly tsy araka ilay iray efa ananantsika, izay nifantoka taminà fifaninanana telo na efatra lehibe.
JMF: Tianay ny hiantso azy io hoe “ny fampisehoana goavana indrindra manerana ny tany,” nefa ampahany betsaka amin'ireo fampisehoana no kenda, indrindra fa noho ny famarotana ilay fetibe. Heverinao ve fa noho ity valanaretina ity dia hisy fotoana iray fanararaotra hamerenana ifotony ny Karnivaly ka hahafahany indray ho lasa fandrindràna feo goavana, no sady mametraka ihany ny soatoavin'ny fahaizamamorona ananantsika sy manome fahafinaretana / fanafahana?
CE: Tena mila mamerina indray izahay, satria ao anatin'izao toedraharaha izao, raha maharitra mihoatra bebe kokoa noho ity karnivaly ity io, mila ifantohanay ny fomba tianay mba hampandeha azy io indray ho anay: ny fanaovana hetsika sy fandraisana anjara fa tsy famokarana sy fanjifàna. Tsy midika akory izany hoe tsy hisy fifanakalozana loharanon-karena mihitsy … mbola hifanakalozana ny fihetsehampo, ara-batàna sy ny ara-bola, saingy ny risipo manosika no mety ho hafa. Mila atao misy mihoatra noho ny karnivaly iray anefa izany.
JMF: Inona no fahatsiarovana maminao indrindra tamin'ny Karnivaly ary nahoana ianao no mihevitra hoe zavadehibe ny fitazonana ilay fetibe ho velona hatrany?
CE: Ny manasa-dàlana tamin'ny Panorama 1989 … ny fientanentanana sy indrindra indrindra, ny vahoaka. Tena toy ny herinaratra; ny gadona nofinidy tamin'ny panorama dia ilay ‘Somebody.’ Majika sy fifampikasohana no tsapako tamin'izany fotoana izany. Raha ny marina dia tsy afaka ny ho faty ny Karnivaly. Mihevitra aho fa amin'ity taona ity, afaka manao zavatra izahay mba hahatsiarovanay an'izany, amin'ny fanaovana sy ny fahatsapana fotsiny koa … fahatsapana hoe hatraiza ny fifampikasohanay tsirairay rehefa mankalaza io fetibe io izahay.
JMF: Manerana ny tany, noporofoin'ity valanaretina ity hoe tena miankina be amin'ny asan'ireo mpamoron-javatra ny olona maro. Inona avy ireo fomba azo tsapain-tànana azontsika anomezana lanja ireo mpanakantontsika?
CE: Izaho mihevitra hoe omen'ny olona [lanjany ny mpanakanto] saingy ny rafitra ananantsika dia tsy napetraka hanohana ny indostrian'ny taokanto, araka izany dia nisy ny eritreritra sasantsasany [tonga tany amin'ny ] fametrahana fotodrafitrasa ho an'izany. Nanampy be tamin'izany nandritra io vanimpotoana io ny aterineto sy ny media sôsialy. Io no fomba nataonay hifandraisana tsy tapaka ary nifampizarànay ny asa hatrany am-piantombohan'ny valanaretina: podcasts, kaonseritra ety anaty aterineto ary filazana ao amin'ny tranonkalanay.
JMF: Inona no vinanao ho an'ny taona 2021 sy hatrany lavitra any?
CE: Ity Karnivaly ity, mba hahafahany manao izay rehetra azonay tantanina hanomezana aina vao ny fanahinay. Hatrany lavitra any hoe? Miasa ho anay, fa tsy ho an'ny fanjifàna ivelany – fifandanjàna eo amin'ny fameloman-tena sy ny fahaizamamorona.
Trinite sy Tobago
4 ora izayEtazonia
3 herinandro izayHaiti
4 herinandro izayAmerika Latina